दाङमा माघ साँस्कृतिक महोत्सवः संस्कृति संरक्षणमा जोड - Sisne Online
दाङमा माघ साँस्कृतिक महोत्सवः संस्कृति संरक्षणमा जोड
प्रदेन नं. ५ थारु र मगरको बहुल्यता भएको ठाउँ भएकोले माघी पर्वको दुई दिन बिदा दिदै आएको र अहिले पनि दुई दिन बिदा स्वीकृत भईसकेको उनले समेत उनले बताए । ‘केही व्यक्ति धनी हुदैमा समृद्ध आउँदै,’ उनले भने ‘ समृद्ध आउँनका लागि पिछडीएका वर्गको जीवनस्तरमा सुधार आउँनु पर्छ । र, समुदाय संग जोडिएको कला, संस्कृति, भेषभुषा आदिमा पहिचान जोडिएको हुनुपर्छ ।’
राजधानी यो या त्यो ठाउँमा हुन्छ भनेर आफूले भन्न नमिल्ले उनको भनाई रह्यो । भने बिकासका लागि प्रदेश सरकारले घोराही–तुल्सीपुर, कोहलपुर–नेपालगञ्ज र बुटवल–भैरहवा गरी तीनवटा मेघासिटी आयोजना ल्याएको र काम पनि शुरु भइसकेको समेत उनले बताए ।
त्यसैगरी सभाले थारुहरुको समस्याको आवाज उठाउँने, कलम चलाउँने र सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको छ । जसमा डा. गोबिन्द आचार्य , फुलमान चौधरी ,नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सबिन प्रीयासन, के एल पीडित ,दुर्गालाल केसी ,बसुन्धारा गौतम,चन्द्रप्रसाद चौधरी ,छोटीलाल चौधरी ,जगबिर चौधरी ,पद्मा चौधरी ,सुन्दरराम चौधरी ,शम्भुप्रसाद चौधरी ,लिलाराम चौधरी ,भोजराज अधिकारी, बिष्णु चौधरीलाई सभाले सम्मान गरेको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति गर्दै एस.इ. इ. मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने निराजन चौधरी र प्रियांक चौधरीलाई पनि सम्मान पत्रले सम्मान गरेको हो ।पुस २५ गते शुक्रबारदेखि शुरु भएको माघ साँस्कृतिक महोत्सव पुस २८ गतेसम्म चल्ने छ । कार्यक्रमको सहजिकरण सभाका सचिब प्रकाश चौधरीले गरेका हुन् ।